विश्वमा कोरोनाबाट ९ लाख ९८ हजारले ज्यान गुमाए, कति पुगे संक्रमित ? – News Dainik
News desk ११ आश्विन २०७७, आईतवार ०७:२८ समाचार प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को नयाँ संक्रमण र मृत्युदर अझै घट्न सकेको छैन । अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या ३ करोड ३० लाख नाघेको छ भने ९ लाख ९८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
कोरोना भाइरससम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गरिरहेको साइट वर्ल्डोमिटर्सको पछिल्लो विवरण अनुसार विश्वभर ३ करोड ३० लाख ५२ हजार ८४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । चीनको हु बेई प्रान्तको राजधानी वुहानबाट गत वर्षको डिसेम्बर अन्तिममा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विश्वभर ९ लाख ९८ हजार ६७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । संक्रमितको संख्या ३ करोड ३० लाख ५२ हजार ८४ छ ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा बिहानसम्म २ लाख ९ हजार १७७ जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ । अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या ७२ लाख ८७ हजार ५६१ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ४३ हजार २०६ भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ७३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९४ हजार ४३४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १ हजार १२४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ८९ हजार १० जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ५९ लाख ९० हजार ५८१ पुगेको हो ।
प्रभावित देशको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या ४७ लाख १८ हजार ११५ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ७१२ जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ४१ हजार ४४१ पुुगेको छ ।
नेपालमा शनिबार देशभर गरी १,२०७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमित संख्या ७१,८०० नाघेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ४६७ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या ५३,००० नाघेको छ ।
अघिल्लॊ उपत्यकामा घाम लाग्यो, कस्तो रहला आजको मौसम ?
पछिल्लॊ निजीले घटाएनन् पीसीआर शुल्क, १३ दिनमै उठाए साढे ३ करोड बढी